2019 Chinese Factory Surface Mount Ex-ubufakazi Lamp for ...
I-Chengdu Taiyi IP65 ATEX Explosion Proof LED Emergenc ...
Easy Ukufakwa Surface egibele Explosion-ubufakazi Le ...
ATEX LED Explosion-proof Ibanga Exd IIB T4 IP66 LED S ...
IChengdu Taiyi IEC Isitifiketi Sokuqhuma kwe-LED nge-IP67
Ukukhanya kwe-Explosion kufanelekile ezindaweni ezinkulu ezivuthayo neziqhumayo njengezitshalo ze-petrochemical, ama-workshops namapulatifomu kawoyela aselwandle.
2019 Chinese Factory Surface Mount Ex-ubufakazi Lamp for Indawo enobungozi
Izibani ezi-LED zokuqhuma zinganikeza ukukhanyisa okujwayelekile ezindaweni eziyingozi, njengezindawo zokucwenga uwoyela, iziteshi zokugcwalisa uphethiloli, izipikili, iziteshi zokumpompa, izimayini, imikhumbi, izimboni zokupenda nezinye izindawo ezinomswakama ophezulu, izinga lokushisa okuphezulu nothuli.
Izikhukhula zethu ze-LED zokuqinisekisa ukuqhuma kulula ukuzifaka futhi zinempilo ye-bulb ekalwe ngamahora ayi-100,000 embonini kanye newaranti yeminyaka emi-3 (ngokuzikhethela iminyaka emi-5). Sicela ubheke isitayela soku-oda esingezansi ukuze ufunde ngemikhiqizo yethu ehlangabezana nezidingo. Sicela uxhumane nathi ngamanani noma eminye imininingwane.
Ukuqhuma kwesikhukhula se-Square Alluminium Alloy
Amalambu ezikhukhula asetshenziswa ezindaweni eziyingozi lapho kukhona igesi evuthayo nothuli, futhi angavimbela ama-arcs, izinhlansi kanye nokushisa okuphezulu okungenziwa ngaphakathi kwesibani ekushiseni igesi evuthayo nothuli endaweni ezungezile, ukuze kuhlangatshezwane nokuqhuma izidingo -proof.
IChengdu Taiyi IP65 ATEX Explosion Proof LED Emergency Light
Ukukhanya okuphuthumayo okuholele ekuqhumeni okukhiphayo kwenziwa nge-3.7V lithium ion ukuvikelwa kwemvelo ibhethri le-2200mah; ihlangabezana nezinga elisha likazwelonke lokuqinisekisa ukuqhuma. Inikwe amandla yi-3.7V lithium ion ukuvikelwa kwezemvelo i-2200mah ukunikezwa kwamandla okuphuthumayo kwebhethri. Lapho amandla amakhulu enqanyuliwe, ukukhanyisa okukhombisa ukuqhuma kokukhanyisa okuphuthumayo kungaqalwa ngokushesha, futhi kungalawulwa nangaphandle.
Ukufakwa okulula kwe-Surface Mounted Explosion-proof Led Ceiling Light for Factory
Izibani zamapulatifomu ezingaqhuma ukuqhuma zikulungele ukukhanyisa okungaguquki ezindaweni ezivuthayo nezinokuqhuma njengezitshalo ze-petrochemical, amapulatifomu kaphethiloli, iziteshi zegesi, amakamelo empompo kawoyela, iziteshi zokudlulisa, njll .; Izindawo zegesi eziqhumayo ezikuZone 1 noZone 2; Izindawo ezingama-Zone 21 kanye ne-Zone 22 ezivuthayo.
I-Solar Powered Led Marine Navigation Aviation Obstacle Warning Light
Izibani zokuvimbela ukuqhuma kanye nokugcinwa kwezinga eliphansi lekhabhoni ephansi zilungele indawo enobungozi yegesi, indawo 1, indawo 2, indawo yothuli eqhumayo, indawo engu-20, indawo engu-21, indawo engama-22, e-IIA IIB IIC ekilasini elinobufakazi bokuqhuma, indawo yokushisa ye-T1-T6 imvelo, ukukhishwa kwe-petroleum nokugcina Amakhemikhali, imithi, indwangu, ukuphrinta, izakhiwo zempi, amalambu, izindawo eziyingozi.
I-Alarm Emergency Warning Siren ene-Strobe Light
I-alamu yomsindo nokukhanya kwe-alamu (efushaniswe njenge-alamu) i-alamu engenamakhodi, efanele ukufakwa ezindaweni zegesi eziqhumayo ezineqembu lokushisa le-IIC (IIB) grade T6. Lapho isimo esiphuthumayo esifana nengozi noma umlilo senzeka endaweni okwenziwa kuyo, umlilo Isiginali yesilawuli ethunyelwe yisilawuli se-alamu ivuselela isekethe lomsindo nokukhanya kwe-alamu, ithumele amasiginali we-alamu yomsindo nokukhanya, bese iqedela injongo ye-alamu. I-alamu ingasetshenziswa futhi ngokubambisana nenkinobho ye-alamu yesandla ukufeza izinhloso ezilula zomsindo nokukhanya kwe-alamu. I-alamu ingasetshenziswa ngokuhlanganyela nesilawuli se-alamu yomlilo yanoma yimuphi umkhiqizi ekhaya naphesheya. I-alamu isebenzisa ishubhu elikhanyisa ngokukhanyayo elikhanyayo le-LED, elibonakala ngokusobala kumadigri angama-360.
Ukushintshwa kwe-20W 40W IP65 Tri-proof LED Light
Isibani esinobufakazi obuthathu sisho ubufakazi obuthathu: ukungangeni manzi, uthuli-ubufakazi, futhi anti-konakalisa. Izinto ezikhethekile zokulwa namachibi kanye ne-anti-corrosion nezinto zokuvala uphawu lwe-silica gel zisetshenziselwa ukufeza izidingo zokuvikela amalambu. Leli lambu lenza imishanguzo yokulwa nokugqwala, yokuvikela amanzi neye-anti-oxidation ebhodini lokulawula isifunda. Ukuhlose izici zokwehliswa kokushisa okuphansi kokufakwa uphawu kwebhokisi kagesi, isifunda esikhethekile sokusebenza kwesibani sokushisa esihlakaniphile esinobufakazi obuthathu sinciphisa ukushisa okusebenzayo kwe-inverter yamandla futhi sihlukanise isifunda sokuvikela kusuka kugesi onamandla. Ukwelashwa okuphindwe kabili kwesixhumi kuqinisekisa ukuphepha nokuthembeka kwesifunda. Ngokwesimo sangempela sokusebenza kwesibani esinobufakazi obuthathu, ingaphezulu lebhokisi lokuvikela lesibani liphathwa nge-nano-kufuthwe ukwelashwa kobufakazi bomswakama nokulwa nokugqwala ukuvimbela ukungena kothuli nomswakama.
2020 I-Standard Atex Led Explosion Proof Flashlight
Amathoshi okuqinisekisa ukuqhuma asetshenziselwa ukucisha umlilo, amandla kagesi, amabhizinisi ezimboni kanye nezimayini nezinye izindawo ezivuthayo neziqhumayo ukunikeza ukukhanya kwamaselula. Ilungele kakhulu ukusebenza kwezinsimu ezahlukahlukene, njengoku: ukuhlola komhlaba, ukuhlola ezokuvakasha, ukugada imingcele, ukugada ezokuvikela ezasogwini, ukutakula nokusiza izinhlekelele, ukusebenza kwensimu, ukusebenza kwemigudu, ukuhlolwa kwezikhumulo zezindiza, ukuhlolwa kwezitimela, ukuvubukulwa kwemvelo kanye nomyalo womlilo, uphenyo lobugebengu, ukusingathwa kwengozi yomgwaqo, ukulungiswa kwamandla kagesi Lindela ukusetshenziswa kwezidingo zokukhanyisa.
Isitsha Esikhokhelwayo Esiphathekayo Esiphathekayo Sokufuna Ukukhanya Nesibuthe
Umsebenzi wesikhathi eside kanye nokukhanyisa okuphuthumayo kunikezwa ezindaweni ezahlukahlukene ezinjengokuhlolwa kwezitimela, ukugadwa kwemisebenzi yomphakathi, ukunakekelwa kwezimoto, insimbi, amandla efektri, amandla enethiwekhi, ukuvimbela izikhukhula nokusiza izinhlekelele nezinye izimboni.
Ibhokisi Lokulawulwa Kukagesi Eliqokiwe elenziwe ngokwezifiso
Ibhokisi lokusabalalisa ugesi lokuqhuma kwe-BXP10-100 linganikeza ukuvikeleka ezindaweni eziyingozi, futhi lingathola futhi lixazulule izinkinga okokuqala ngqa, njengemboni ye-petrochemical, ifektri yefektri, imboni yezimayini, imboni yokudlulisa amandla nokunye okuswakeme okuphezulu, izinga lokushisa okuphezulu nothuli Indawo.
Uchungechunge lwethu lokusabalalisa ugesi (BXP10-100) luchungechunge lufakelwe igobolondo lezinto ezikhethekile, izingxenye zangaphakathi eziguquguqukayo nezenziwe ngezifiso, futhi linewaranti yonyaka ongu-1. Sicela ubheke itafula loku-oda elingezansi ukuze ufunde ngemikhiqizo yethu. Sicela uxhumane nathi ngamanani noma eminye imininingwane.
IKhabhinethi Yokusabalalisa Ubufakazi Obucindezelayo Obunengcindezi
Ikhabethe lokuhambisa amandla elinamandla wokuqhuma elinamandla wokuqhuma, ikhabethe likagesi nokusebenza okuthembekile kokubekwa uphawu. Ngaphansi kokulawulwa kohlelo lokulawula okuzenzakalelayo, kwethulwa igesi evikelayo, futhi ingcindezi egumbini lokucindezela elihle likhulu kunengcindezi engaphandle kwegumbi, enganikeza i-alamu engaphansi kwengcindezi ezindaweni eziyingozi, nokusebenza kwamandla aphansi ugesi ungathola futhi uxazulule inkinga ngesikhathi sokuqala kwengozi, ngokwesibonelo imboni yePetrochemical, amaworkshops wefektri, imboni yezimayini, imboni yokudlulisa amandla nezinye izindawo ezinomswakama ophezulu, izinga lokushisa okuphezulu nothuli.
YT / YZ / GZ IP54 1/3/4/5 pin 250v / 400v Explosion Proof Socket and Plug
Idivayisi yokuqhuma i-plug-in inganikeza ukuqala kokuma nokulawula ukuguqulwa kwemoto ezindaweni eziyingozi, njengemboni yamakhemikhali, isiteshi sikaphethiloli, uphethiloli, imboni yezempi nezinye izindawo ezinomswakama ophezulu, izinga lokushisa okuphezulu nothuli.
Ikholomu Lokusebenza Lokulwa Nokuqhuma Lokuqhuma
Ikholomu yokusebenza kobufakazi bokuqhuma uhlelo lokulawula oluguquguqukayo olunganikeza amakhasimende amayunithi wokulawula ajwayelekile noma endawo noma amayunithi wokubonisa anezidingo ezikhethekile. Sinikezela ngezinhlobo ezintathu zokuvalelwa okujwayelekile ukuzivumelanisa nezimo ezintathu zokulawula nokubonisa. Ngasikhathi sinye, kungafakwa amagobolondo ama-ComEx afinyelela kwamathathu ukuze asetshenziswe ngokuya ngezidingo zakho. Usayizi wenhloko ehola ngocingo kungaba yi-M20x1.5 noma i-M25x1.5. Okubalulekile kungaba ipulasitiki noma insimbi. Ikhanda elihola phambili lepulasitiki liqinisiwe ngqo ukulungisa, asikho isidingo sokuqinisa inathi. Ikhanda elihola phambili lensimbi lilungiswa yipuleti lensimbi lomhlaba ebhokisini. Ikholomu eyodwa yokusebenza ingaba nezinhloko ezihola phambili ezingama-M20 okungenani ezimbili. Ukuze kwenziwe lula ukusebenza esizeni, indawo ebiyelwe ngepulasitiki ngayinye ifakwe ipuleti lenombolo.
Ibhokisi Lokuthengisa Lokuqhuma Elikahle kakhulu le-Exd Explosion-proof Die Casting Aluminium
Ibhokisi lokuhlangana lobufakazi be-Explosion-Explosion-proof box box: BHD51- □ libonakala ngegobolondo le-aluminium alloy cast, ukufafaza indawo, ukubukeka okuhle.
Ikhebula le-Cable Gland elibonisa amanani entengo aphansi
Indlala yokuqinisekisa ukuqhuma iyinsiza yokuqinisekisa ukuqhuma esetshenziswa ezintambo ezifuneka kakhulu. Ingafakwa ekuxhumaneni phakathi kwethebula lekhebula elinobufakazi bokuqhuma kanye nemishini kagesi engaqhume ukuqhuma. Ingahola kukhebula futhi ilungise isikhundla ukuze izuze imiphumela yokufaka uphawu nokuqhuma. Ukusebenza kokuqhuma okungabonakali kokuqhuma, ukwakheka okuphephile nokwethembekile, ukufakwa okulula nokulula, ileveli ephezulu yokuvikelwa nezinye izinzuzo. Isetshenziswa kabanzi kuphethiloli, amakhemikhali nakwezinye izindawo ezidinga ukuphepha ngogesi nokuqhuma, ikakhulukazi efanelekayo kwezinkundla ezingaphesheya kwezilwandle nemikhumbi edinga izindawo eziqinisekisa ukuqhuma kukagesi.
I-75KW OEM Engagqwali Idizayini Kagesi Yokungeniswa Kokushiswa Kokuphekela
Umpheki wokungeniswa, owaziwa nangokuthi umpheki wokungeniswa, uwumkhiqizo wezinguquko zanamuhla zekhishi. Akudingi ilangabi elivulekile noma ukushisa kokuqhuba kepha ivumela ukushisa ukuthi kwenziwe ngqo ezansi ebhodweni, ngakho-ke ukusebenza kahle kokushisa kuye kwathuthukiswa kakhulu. I-kitchenware esebenza kahle kakhulu futhi yokonga amandla, ehluke ngokuphelele kukho konke ukushisa kwendabuko noma okokushisa okungashisi umlilo. I-induction cooker yinto yokupheka kagesi eyenziwe ngomthetho wokushisa kwe-elektronignetic induction. Yakhiwe ngamakhoyili wokushisa wokungeniswa wefriji ephezulu (amakhoyili wokuzijabulisa), amadivayisi wokuguqula amandla amaza aphezulu, izilawuli, nezitsha zokupheka ze-ferromagnetic pot-bottom. Lapho usetshenziswa, amandla ashintshanayo adluliselwa kwikhoyili yokushisa, futhi kukhiqizwa amandla kazibuthe ashintshanayo azungeze ikhoyili. Imigqa eminingi kazibuthe yensimu kazibuthe eshintshanayo idlula emzimbeni webhodwe lensimbi, futhi inani elikhulu lamanje le-eddy likhiqizwa phansi ebhodweni, ngaleyo ndlela lenza ukushisa okudingekayo ekuphekeni. Alikho ilangabi elivulekile ngesikhathi senqubo yokushisa, ngakho-ke kuphephile futhi kuhlanzekile.
I-Sieving Calcium Carbonate ye-Petroleum Proppant Ceramsite Sand Vibrating Screen
I-alias yesikrini esidlidlizayo nayo ibizwa nangokuthi: ubukhulu bokudlidliza ohlangothini obuthathu bokuhlunga isihlungi se-powder umshini-ojikelezayo wokudlidliza isikrini-odlidliza isikrini-esidlidliza isikrini-esidlidliza isikrini-isiyingi sokudlikiza kwesikrini. Kusetshenziswa umgomo wokudlidliza kwe-motor motor, okokusebenza kuphonswa phezulu esibukweni, futhi ngasikhathi sinye, kuhamba phambili ngomugqa oqondile ukufanisa isikrini ngokufanele ukuze kufezekiswe inhloso yokuhlolwa.
Umshini Deaerator nge High Quality
I-vacuum degasser iyithuluzi elikhethekile elisetshenziselwa ukucubungula uketshezi lokubhola lwegesi. Ifanele zonke izinhlobo zemishini yokusekela futhi idlala indima ebalulekile ekubuyiseni amandla adonsela phansi odaka, ukuzinzisa ukusebenza kwe-viscosity yodaka, nokunciphisa izindleko zokumba. Ngasikhathi sinye, ingasetshenziswa futhi njenge-agitator enamandla amakhulu.
I-Mud Cleaner ihlangene Bu Desander ne-Desilter
Desanding and desilting machine integrated is a new type of secondary and tertiary solid solids equipment for drilling mud also developed to adapt to the development trend of oil oil.Ukufuna nokudiliza umshini ohlanganisiwe wuhlobo olusha lwemishini yokulawula ukudla okuqinile kwamabanga aphansi naphezulu ukuze kuboshwe udaka olwenzelwe ukujwayela inkambiso yentuthuko yokumba uwoyela. Kuyinto eduka yisiphepho, isiphepho esinciphisa amandla kanye nesikrini sokudlikiza esigcwala phansi. Amathathu kokukodwa. I-drilling cleaner yodaka inesakhiwo esihlangene, indawo encane, nemisebenzi enamandla. Kungukukhetha okuhle kokusebenza kahle kokuhlanza imishini yokulawula isigaba esiqinile kanye nesezingeni eliphakeme lokulawula udaka.
Umshini we-Impeller Diesel Dredger Sub Mercible Dredging Sand Pump Machine
Sand futha uhlobo centrifugal udaka futha, esetshenziswa ukuthutha ukumiswa aqukethe isihlabathi, slag, njll impeller ikakhulukazi evulekile. Ulwelwesi lwepompo ngokuvamile luhlukaniswa lube yizinhlobo ezimbili, insimbi engamelana nokugqoka nenjoloba engavumi ukugqoka. Ngaphezu kwalokho, faka amanzi anomfutho ophakeme engxenyeni eshibilikayo yomgudu wepompo ukuvimbela udaka nesihlabathi ekungeneni engxenyeni eshelelayo. Lolu hlobo lwepompo lungasetshenziselwa ukuhambisa uketshezi oluqukethe okuqinile okuqinile nosayizi wezinhlayiyana ongaphezu kwama-meshes angama-48.
I-Innovative Decanter Centrifuge
I-Centrifuge ngumshini osebenzisa amandla we-centrifugal ukuhlukanisa izinhlayiya eziwuketshezi nezinamandla noma ingxenye ngayinye enhlanganisweni yoketshezi noketshezi. I-centrifuge isetshenziswa kakhulu ukwehlukanisa izinhlayiya eziqinile ekumisweni kuketshezi, noma ukuhlukanisa iziphuzo ezimbili ezingahambelani ku-emulsion ngobukhulu obuhlukile (ngokwesibonelo, ukwahlukanisa ukhilimu nobisi); ingasetshenziswa futhi ukususa ama-Liquid ezintweni eziqinile ezimanzi, njengokusebenzisa umshini wokuwasha ukuphotha izingubo ezimanzi ezomile; izihlukanisi ezikhethekile ze-ultra-velocity tube nazo zingahlukanisa izingxube zegesi zobukhulu obuhlukile; sebenzisa izici zobuningi obuhlukile noma usayizi wezinhlayiya eziqinile kuketshezi ukuze uzinze ngesivinini esihlukile, kanti enye inzika I-centrifuge nayo ingahlukanisa izinhlayiya eziqinile ngokuya ngobukhulu noma ubukhulu bezinhlayiyana.